आज असार २० गते शुक्रवार , तपाईको दिन कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल ! - Bigul News
आज बिक्रम संवत २०७६ साल असार महिनाको २० गते शुक्रवार तद अनुसार सन् २०१९ जुलाई ५ तारिख, तपाईको दिन कस्तो रहला हेर्नुहोस आजको राशिफल !
कार्यमा सफलता नमिल्नाले समय व्यर्थ खर्च भएर जानेछ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र अनुकुल रहेको छ। सन्तान सुख मिल्ने छैन। स्वास्थ्यमा समस्या देखिन सक्ला होसियार रहनु होला। महत्वपूर्ण निर्णय सकेसम्म आजको नलिदा नै राम्रो हुनेछ। समग्रमा तपाईका लागि आजको दिन मध्यम फलदायी रहेको छ।
प्रकाशित : बिहिबार, असार १९, २०७६१९:४८